ओलिलाइ दोष लगाउदै प्रचण्ड ले भर्खरै गरे यस्तो घोषणा – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/ओलिलाइ दोष लगाउदै प्रचण्ड ले भर्खरै गरे यस्तो घोषणा
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले पार्टी संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रेको बताएका छन् ।उनले नेकपाकै अर्का अध्यक्षको सक्रियतामा नेकपा एमाले पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुु र सरकारले पार्टीमा हैकम जमाउन खोज्दा पार्टी संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् । प्रचण्डले पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध राम्रो बन्न नसक्नुमा सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासको अभाव भएको पनि बताए ।
पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला शुक्रबार नेकपाका संस्थापक नेताहरु पुष्पलाल र नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृतिका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले पुष्पलाल, पार्टीको अवस्था, सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध लगायतका विषयमा यस्तो धारणा राखेका हुन् । सो कार्यक्रममा प्रचण्डले राखेको धारणाको सम्पादिन अंशः
पुष्पलालको बिडम्बनापूर्ण स्थिति
आठ सालमा पुष्पलाललाई महासचिवबाट हटाउनु, १० सालमा उहाँलाई महासचिव हुनबाट रोकिनु, २०१४ सालमा पार्टीको नीति र कार्यदिशा उहाँकै पारित हुने नेतृत्वचाहिँ रायमाझीले गर्ने । जो माझी प्रवृत्ति भन्छौँ हामी, बडो बिडम्बनापूर्ण स्थिति पुष्पलालले भोग्नुपर्यो ।
विचार, सिद्धान्त, नीति पुष्पलालको पारित भएको छ । नेतृत्व त्यो नीति विरोधी मान्छेको छ । तपाईंहरुले हेर्नुभयो भने तपाईँहामीले पनि हिजोआज त्यस्तै त्यस्तै भोगेको हो कि ? नीति एउटा पारित हुने नेतृत्व अर्कोले गर्ने भएको हो कि ? हामीभित्रको समस्याको चुरो त्यतै कतै पो छ कि ? भनेर हेर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
पार्टी विवेक, सरकार सत्ता
पार्टी भनेको विवेक होे । सरकार भनेको सत्ता हो । विवेक र सत्तामध्ये कुन प्रधान हो भन्यो भने कम्युनिस्ट विचार, मार्क्सवाद र हामी सबैले मान्ने कुरा विवेकले सत्ताको नेतृत्व गर्नुपर्दछ । त्यो भनेको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्दछ भनेकै हो । सत्ताले पार्टीमाथि हैकम जमाउनेजस्तो स्थिति भयो भने त्यो हाम्रो वैज्ञानिक मान्यता भन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ ।
तपाईँ हामीले यो दुई वर्षको अवधि हेर्यौँ भने विवेकले सत्ताभन्दा पनि सत्ता विवेकमाथि हावी हुने हो कि ?समूहको अधिनस्त व्यक्ति हुने ठाउँमा कतै व्यक्तिको अधिनस्त समूह भएर जाने खतरा पो पैदा भएको हो कि ? तपाईंहरुले यसलाई पक्कै विचार गर्नुभएको होला । समूह अन्तरगत व्यक्ति हुने हो । त्यसकारण सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई कम्युनिस्ट पार्टीभित्र स्थापित गर्न मार्क्सकै पालादेखि बल गरिएको हो ।
नक्साबारे बैठकबाटै मुख्यसचिवलाई फोन
जब नक्साको विषय उठ्यो र हिन्दुस्तान (भारत) ले नेपालको भूभागलाई समेत गाभेर नक्सा निकाल्यो । म त्यतिबेला जे भएपनि कार्यकारीको रुपमा स्थायी समिति बैठकको अध्यक्षता गर्दै थिएँ । भारतले हाम्रो भूमि मिचेर नक्सा निकालेको छ यो बिल्कुल गलत भएको छ त्यसकारण हामीले हाम्रो भूमि (उनीहरुको भूमि होइन, उनीहरुको एकइन्च भूमि हामीलाई चाहिएन । ) एक इञ्च पनि छोड्न सक्दैनौँ भन्ने उद्घोषसहित स्थायी समितिको बैठकबाट तुरुन्तै नक्सा प्रकाशित गर्नैपर्छ भनेर निर्णय गर्यौँ । र, मैले सरकारलाई यो नक्सा प्रकाशन गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन भनेँ । मंसिर २९ गतेबाट स्थायी समिति बैठक सुरु भएकोमा नक्सा निकाल्ने कुरा गरियो । तर, सरकारले भूमि नक्सा निकाल्ने भन्दा भूमि नै फिर्ता गर्ने कुरा गरेको तपाईंहरुले सुन्नु नै भयो । पहिला उनीहरुले नक्सा निकाले हामी पनि नक्सा निकालिहालौँ अनि भूमि पनि फिर्ता गर्ने काम पनि हामीले गर्नैपर्छ भन्ने थियो ।